KALANCHOE BLOSSFELD: DARYEELKA XAALADAHA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Kalanchoe Blossfeld: Sida loo koro ubax
Dhaqan ahaan guri kasta, meel gaar ah ayaa la siiyaa ubax, daryeel iyaga, beerashada iyo dhalmo. Isla mar ahaantaana, qof walba wuxuu jecel yahay dhirta noocyo kala duwan, sidaas darteed qolalka celceliska waxay leeyihiin ugu yaraan 2-3 nooc oo ubax ah. Kala duwanaanshaha noocyada kala duwan ee dhirta guryaha, Kalanchoe Blossfeld waxay ku taallaa meel gaar ah, taas oo sannado badan loo yaqaano oo caan ku ah meelaha bannaan ee dalkeenna.
Sababtoo ah iyada oo aan qabyo-qabin iyo is-waafajinta xaaladaha dhabta ah ee dayactirka, ma adagtahay in la koro Kalanchoe, laakiin khubaro ayaa weli kugula talineysa in aad tixgeliso isbarbardhigga warshadda oo aad ogtahay sida loo daryeelo Blossfeld's Kalanchoe, waxa uu doorbidayo dayactirka iyo daryeelka.
Kalanchoe Blossfeld: Noocyada noocyada
Kalanchoe Blossfelda waa mid ka mid ah dhirta yar ee gudaha waxay isku dhafan yihiin qaybo farshaxan iyo daaweyn. Dalkan ubaxyada ah ee ubaxan waa mid ka mid ah aagagga kuleylka diimeed ee Madagascar. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo tani, Blossfeld's Kalanchoe ayaa iska leh maadooyinka aan la qabin ee aan si fudud loo korin karin guriga. Si arrintan loo sameeyo, waa ku filan in la ogaado oo kaliya dhawr tilmaam iyo talooyin.
Dhirta gudaha sida hamedorea, cactus, dieffenbachia, hippeastrum, chrysanthemum qolka, saelogina orchid, fragrantus fragrant, bougainvillea, freesia iyo geedo timir ah ayaa runtii abuuri kara jawi dagan oo raaxo leh qolkaaga.
Eeg Blossfeld - Kalanchoe leh caleemo waaweyn, kaas oo yar yar yar, dhif ah ka badan 1 cm dhexroor, ubax Terry soo ururiyey burushyada waaweyn. Midabka dabiiciga ah ee ubaxa waa casaan, iyo ka mid ah noocyada hybrid waxaad ka heli kartaa huruud ah, casaan, rujin iyo inflorescences xitaa. Kalanchoe Blossfelda Blooms muddada dhamaadka jiilaalka - bilowga guga iyo wuxuu socon karaa wax ka badan laba bilood.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah xidhxidhka gaarka ah ee maaddooyinka waxtar leh ee ku jira qayb ka mid ah casiirka Kalanchoe, dhirta waxaa si firfircoon loo isticmaalaa daawada iyo qurxinta. Horeba maanta, xalalka, boomaatada, kiriimyada, looska, maaskarada iyo tonics ayaa lagu iibiyaa iyada oo saldhig u ah hannaanka Kalanchoe. Sida laga soo xigtay xogta shaybaarka, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa cadeeyay inuu yahay mid aad waxtar u leh.
Xaalado daruuri ah ee koritaanka
Ubaxyada dheriga ah ee Kalanchoe Blossfeld waa kuwo aan qabin xaaladaha guriga, laakiin koritaanka, horumarka iyo ubaxyada ubaxyada waxaa badanaa lagu go'aamiyaa sida dhabta ah ubaxa uu ku yaalay guriga iyo sida loo ilaaliyo.
Ma taqaanaa? Sida muuqaalka dhirtu si toos ah ugu tiirsan tahay xaaladaha guriga ee la abuuray, taas oo ah, iftiin, waraabinta, ka kooban ciidda iyo bacarimis.
Kalanchoe wuxuu loola jeedaa dhirta u baahan iftiinka qoraxda joogto ah laakiin waqti isku mid ah ayaa jira sifooyin gaar ah. Sidaa darteed, laga bilaabo subaxa hore ilaa duhurkii, dheriga ubaxa waxaa loo oggol yahay in lagu hayo daaqadaha ama meel kale oo iftiin leh. Si kastaba ha noqotee, ka dib qadada Kalanchoe Blossfeld waa mid aad u muhiim ah inaad u guurto hooska, sidaas darteed abuuraya dareen ah habeenkii. Haddii aysan suurtagal ahayn in si joogta ah dib loogu habeeyo ubaxa meel cusub, waxaad ku xalin kartaa dhibaatada adigoo daboolaya dheriga leh mashiinka iftiinka ah. Nidaamka iftiiminta ee Kalanchoe Blossfeld waa qasab, sababtoo ah kadib qadada ayaa ubaxa joojiya si uu u arko qorraxda qoraxda.
Xaaladda heerkulka, dhirta waa mid aan qabyo ahayn oo u adkaysta. Waxay si isku mid ah u dareemeysaa + 20 ° C iyo 5 ° C. Tani waxay u oggolaaneysaa inay qurxiyaan qol kasta oo guriga ah. Laakiin ubaxku si dhakhso ah ayuu ugu qalajin karaa maaddooyinka joogtada ah ee heerkul aad u sarreeya (25 ° C iyo ka sare). Xaaladahan oo kale, waa in la raro ama kor u qaadaa mugga iyo inta jeer ee waraabka.
Inkasta oo dabiiciga ah ee warshadkan, content ee qolalka leh heerarka sare ee qoyaan ay waxyeello u tahay, tan iyo Kalanchoe si firfircoon u nuugo dhammaan qoyaanka la heli karo oo ku uruuray in asliga ah, iyo ma nidaamka xididka. Faa'iidada noocan oo kale ah waxay keeneysaa in la bilaabo firfircoonida geedi-socodka burburka, dhismaha caaryada iyo fungus. Taasi waa sababta Kalanchoe Blossfeld ay u fiicantahay inaad doorato qol leh qoyaan dhexdhexaad ah ama qoyan. Waxaa intaa dheer, waxaa ugu fiican in la dhejiyo ubax leh ubax meel ay ka baxaan qashin-qubka iyo naqshadeynta.
Wixii ubaxan ee guriga, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo nafaqo, nafaqo leh oo horay loo beeray, kaas oo si fiican u nuugi doona oo biyo sii deynaya.
Doorashada ugu fiican waa diyaarinta madaxbannaan ee substrate ah ee koritaanka Kalanchoe Blossfeld. Waa suurad wacan in lagu daro peat, ciid webiga, humus, caws iyo caleemaha cagaarka oo loo siman yahay halbeegga carrada caynkaas ah. Xaaladaha qaarkood, khubaro ayaa kugula talinaya in dhuxusha laga dhigo. Dheriga carrada leh waa inuu lahaadaa lakabka dufanka oo ka kooban dhoobo ballaaran, dhagax la jajabiyey, boodhka xajmiga ama bata lebiska.
Sida loo aaso guriga
Kala guurka cajiibka ah ee Kalanchoe Blossfeld waxay sabab u tahay arrimo badan, sidaa daraadeed ma ahan wax la yaab leh in qof kastaa uu rabo inuu dhirtaas ku leeyahay gurigooda. Si arrintan loo sameeyo, dabcan, iibso ubax dukaanka khaaska ah, laakiin dadka intooda badan waxay door bidaan inay kiciyaan Kalanchoe iyaga keligood.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo wax ku ool ah oo lagu soo saari karo dilaacaankan: gooyn, abuur iyo caleen. Hababka waa mid kala duwan, gaar ahaan, laakiin mid kasta oo ka mid ah waxay u qalantaa dareen.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay khubarada, Kalanchoe Blossfeld waa wax aad u faa'iido leh in guriga lagu hayo - dhirta ayaa awood u leh inay si firfircoon u soo qaaddo shucaaca waxyeellada leh ee ka soo baxa qalabka korontada. Waxaa ugu wanaagsan in la dhigo dheriga Kalanchoe meel u dhow kumbuyuutar ama TV, maadaama ay taasi si weyn u yareeyn doonto saameynta.
Habka ugu fudud ee lagu dhalin karo Kalanchoe Blossfeld ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay qabashada Ujeedadaas awgeed, gooynta yaryar waxaa loo isticmaalaa, marar dhererkeedu ka badan yahay toban sentimitir. Waa suurtagal in la gooyo jirida noocaas oo leh mindi kasta, ka dibna caleemaha dhammaan qaybta hoose ee caleemaha waa in laga saaraa. Ka hor inta beeritaanka sapling meel cusub, waa in la qalajiyaa oo lagu hayaa qayb ka mid ah xawaaraha koritaanka xididka.
Wareegidda waxay u fiicantahay inaad isticmaasho dherer ballaaran oo qotodheer leh nidaam dheecaan leh (godadka) ee saldhigga. Beerta ubaxa ubaxa waa inay ahaato mid nafaqo leh, oo ay ku jirto peat, ciid, bacriminta iyo ciidda. Qoto dheer ee gooyn beerto, sida caadiga ah, kama badna 5-6 cm, iyada oo lakab kasta oo dunida ah si habboon iyo si sax ah u waafaqsan.
Ka dib markii la beerto goynta, waa muhiim in la siiyo xaaladaha ugu haboon ee xabsiga. Si taas loo sameeyo, biyaha oo ku rid qol leh heerkul joogto ah oo kala duwan oo ah inta u dhaxaysa 20-23 ° C. Ku dhalida by gooyn ayaa had iyo jeer siinayaa natiijo fiican.
Kala saarista Kalanchoe Blossfeld habka dhiman Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan yihiin xirfado iyo wakhti, si kastaba ha ahaatee, waxay ku xiran yihiin shuruucda iyo talooyinka waxay kuu ogolaanayaan inaad had iyo jeer ku guuleysato caleemo wanaagsan oo degdeg ah
Halabuurka ciidda ee beerista iyo dhalmo by jarida waa in ay la mid ah. Beeridda Kalanchoe Blossfeld abuurka waa in lagu sameeyaa heerkul diirran ee ciidda pre-qoyan. Qodista qoto dheer waa in aan ka badnayn 2-3 cm, halka ciidda dusha sare ay tahay inay noqoto iftiin iyo dabacsanaan. Ka dib markii laga beerto abuurka, dhererka geedo waa in la dhigaa qol diiran, laga ilaaliyo qoraallada.
Seeds waxa kale oo soo saari kara plumeria, blueberries, basasha Indian, lisianthus, clivia, adenium, arugula, ash buur (aronia), madow-fruited, fennel iyo aglaonema.
Inta lagu jiro xilliga oo dhan biqilka, dalagyada waa in la waraabiyo si joogto ah, laakiin dhexdhexaad ah. Isla markiiba caleemaha Kalanchoe Blossfeld way koraan oo sii xoogaystaan, waxay isku xoqaan dusha sare si ay u sameeyaan dhawr laanood. Ka dib markii in dhirta loo wareejin karo meel joogto ah.
Nafaqeynta xaashida Kalanchoe Blossfelda waa la qaban karaa wakhti kasta sanadka. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleen qaangaar ah oo warshad ah oo ku dhex dheji dhar kala duwan oo leh ciidda hore loo dhigey. Dheriga waa inuu noqdaa lakab saaro.
Ka hor inta aan la guurin Kalanchoe Blossfeld, hubso inaad tixgeliso xaqiiqda ah in dhalmada ugu fiican ay ku dhacdo substrate qoyan iyo bacriminta.
Caleen la gooyay Kalanchoe waxay u baahan tahay in si adag loo daboolo karo ama kara dhalada. Dhowr maalmood ka dib, caleen, sida caadiga ah, waxay qaadataa xididada oo waxay bilaabataa inay sameysanto warshad buuxda. Ka dib markaa, fur furka, biyo dhexdhexaad ah oo bacrimiya.
Waxaa xusuus mudan in la tixgelinayo kalluunka cagaarka ee Kalanchoe Blossfeld mid ka mid ah doorashooyinka la doorbido.
Xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka, sida loo koro ubax guriga dhexdiisa
Su'aalo muhiim ah oo ku saabsan dayactirka guriga ee Kalanchoe Blossfeld - sida loo daryeelo, biyaha, bacriminta iyo jaridda - Waxay leeyihiin waxyaabo ay tahay in la tixgeliyo si ay u koraan ubax ku filan oo ah sharafka mulkiilaha iyo jaceylka martida guriga.
Ma taqaanaa? Ubaxa Kalanchoe sida ay aaminsan yihiin waa taliyaal dad ah oo ku dhasha calaamadaha Zodiac of Cancer iyo Taurus.
Sidee loo waraabiyaa ubax
Xilliga xagaaga, Kalanchoe Blossfeld waa in la siiyaa biyo joogto ah oo aad u badan, iyadoo laga fogaado qalajinta carrada ubaxa. Biyaha waa in isla markiiba la sameeyaa ka dib markii lakabka sare uu yar yahay qalalan. Waa mid aad u muhiim ah in biyaha dheriga uusan joogsanayn - mugga ugu weyn waa in lagu nuugo nidaamka xididka ubaxa, iyo socodka dheeraadka ah iyada oo loo marayo godadka dheecaanka ee saldhigga dheriga.
Xilliga jiilaalka, yareeya mugga iyo inta jeer ee la waraabiyo waraabiyo, waraabinta ubaxa sida ugu dhaqsiyaha badan. Wixii waraabka, waa in la isticmaalo biyaha la jilciyey iyo horayba loo dejiyey. Tani waxay ka hortagi doontaa uumiga hore ee ubaxa carrada.
Waa muhiim! Inta lagu jiro waraabinta, waa lagama maarmaan in la hubiyo in qoyaanku uusan ku sii socon qaybaha cagaaran ee dhirta, maxaa yeelay taasi waxay gacan ka geysan kartaa horumarinta cudurada fangas iyo koritaanka caaga.
Kalanchoe Blossfelda ma khuseyso ubaxyada guriga oo si adag ugu tiirsan quudinta caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha xaaladaha dhirta ay bilaabaan inay ka sii daraan ilaa xad (gabow, cudurro, cayayaanka, qalajinta, iwm.), Iyo sidoo kale ka dib markii la gooyey xilliyeed, ubaxa waa in la quudiyo.
In dukaamada gaarka ah, Bacriminta for Kalanchoe degaan meel gaar ah oo waxaa matala by noocyo kala duwan oo kala duwan. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo doorasho ah oo ka mid ah bacriminta succulent, kuwaas oo si buuxda u nuugay by warshadda. Isla mar ahaantaana, habka bacriminta si adag ayaa loo mamnuucay in la qabto xilliga qaboobaha. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqada ah in xilliga qaboobaha nidaamka xididada ee Kalanchoe Blossfeld ayaa la duldhigay iyadoo la ilaalinayo xaaladda guud ee warshadda mana awoodi doono in ay la midoobaan walxaha macdanta soo bandhigay, taas oo ka dhalatay taas oo ay ku ururi doonaan ubaxa ubaxa oo si tartiib ah u dilaan ubaxa.
Qarsoodi muhiim ah oo ka mid ah beeraha ubax ee khibrad leh waa tan marka quudinta, kaliya nus ka mid ah caadada ayaa la isticmaalayaa, lagu tilmaamay baakada bacriminta. Cilmi-baaris muddo dheer ah ayaa caddaynaysa in hoos loo dhigo qiyaasta daaweyntu ay waxtar badan tahay sababtoo ah nuugista buuxda ee ubaxa.
Waa muhiim! Marka transplanting ay hubiyaan in ay tixgeliyaan in calanchoe assimilates oo kaliya isku dar ah bacriminta, taas oo hore waxaa si buuxda u kala diri biyo kulul. Xalka noocan oo kale ah bacriminta waa la qaboojiyey kadibna kaliya ayaa lagu dabaqay primerka ubaxa. Haddii kale, dharka sare ma muujin doono waxtarka loo baahan yahay.
Kalanchoe Blossfelda, sida ubaxyada ugu badan ee guriga, baahida manjooyin joogto ah ee caleemaha. Habkani wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay lagama maarmaanka u ah ubaxyada ubaxyada taas oo cutubka jarjaridda si adag loo khasab yahay.
Si aad u noolaato ubax una ilaaliso dhaawaca cudurada iyo cayayaanka, caws ubaxa waa in laga saaro gebi ahaanba, iyada oo aan laga tegin jirridda. All waxyeello, la qalajiyey iyo caleemaha gaboobay waa la jaraa. Xaaladaha qaarkood, waxaad yareyn kartaa dushooda caleemaha dhalinyarada, taas oo ka qayb qaadata koritaanka iyo kororka xaddiga koritaanka dheeraad ah ee ubaxa.
Xoqitaanka ayaa si fiican loo sameeyaa xilliga xagaaga ka dibna ubaxa ayaa la hubin doonaa oo la dubay. Si loo sameeyo caleemaha dhinaca, dhirta waa la jiidan karaa. Waxaa si wanaagsan loo sameeyaa xagaaga marka Kalanchoe ay ku jirto xaaladaha ugu haboon ee xabsiga oo si sahlan u bedeli kara nidaamkan. Farsamadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad siiso Kalanchoe Blossfeld sax ah oo aan caadi aheyn.
Kalanchoe Blossfeld waxay leedahay sicir korodh sarreysa, sidaas awgeed muddo ka dib waxay tallaalku noqotaa mid lama huraan ah. Nasiib wanaag, Kalanchoe, oo ah beer baddal ah ka dib iibka taas oo ah qasab, si dhaqso ah ugu habboon xaaladaha cusub.
Nidaamka asaasiga ah ee dhirta ayaa si dhakhso ah uga dhaqso badan qaybta stem, sidaas darteed ka hor inta aadan ku tallaalin Kalanchoe Blossfeld, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dher weyn oo leh nidaam dheecaan leh.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka laga hadlayo Kalanchoe, ku-tallaalid iyo dhalmo xiriirka dhow sababtoo ah iyada oo aan loo baahnayn, oo waqti go'an, geedka ayaa joojin doona sii kordhaya. Kalanchoe: sida loo baadho ka dib iibsiga? Hawlgalku wuxuu ka dhacaa marxalado dhowr ah, mid kasta oo ka mid ah oo loo baahan yahay in lagu fuliyo daryeel weyn iyo cabsigelin.
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga saarto ubax ka soo dheriga jir ah, hubinta daacadnimada nidaamka xididka. Ka dib markaa, dhirta waa in lagu dhejiyaa dheri cusub, oo ku yaal hoose ee kaas oo ah dheecaan iyo lakabka carrada dilaacay waa in la dhigaa. Waa suurad wacan in la qiyaaso nidaamka asaasiga ah ee Kalanchoe si loo hubiyo xitaa koritaanka.
Waxaa fiican inaad buuxiso ciidda dheriga ee lakabyada, isaftirka iyo bacarimiso marxalad kasta. Natiijo ahaan, nidaamka xididka geedka waa in gebi ahaanba laga dhigo dhulka.
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka ee Kalanchoe Blossfeld
Ubaxa Kalanchoe Blossfelda, daryeelka guriga oo ah mid sahlan oo la fahmi karo, xaaladaha qaarkood oo soo gaara cudurada iyo weerarada cayayaanka. Sababta waxyeeladu waxay noqon kartaa mid kala duwan, laakiin si looga hortago ama loo la dhaqmo, waa inaad ogaataa halista suurtogalka ah.
Haddii inta lagu jiro kormeerka muuqaalka kore ee grayish ee joogtada ah oo aan ka xuneyn oo ka kooban cayayaanka yaryar ayaa laga helay dusha sare ee warshadda, waxaan si ammaan ah u oran karnaa Kalanchoe waxaa saameeya qulqulka. Iyadoo ay ka shaqeeyaan, xaaladda guud ee ubaxa waa si deg deg ah sii xumaanaya, infekshannada fungal muuqan, iyo joojinta ubax.
Ilaalada ayaa soo saara xab adag oo sunta ah, taas oo ah sababta ay tahay in ay ka hormaraan daaweynta khamriga ee goobaha dhirta. Ka dib markaa, cayayaanka waxaa laga saari karaa maro jilicsan ama buraash ah, oo dhammaystiraya nadiifinta daaweynta alkahoosha lagu celiyo.
Iyadoo dhaawac weyn u gaarsiisan gaashaanka waxaad isticmaali kartaa aalkolo saafi ah, laakiin dawo ubax ah oo ku salaysan, taas oo lagu bixiyo dukaamada. Daaweynta kaddib, Kalanchoe Blossfelda si buuxda ayaa dib loogu soo celiyaa.
Dhibaatada ugu caansan iyo khatarta ah ee loogu talagalay warshadda noocyadaas. Waxaa lagu ogaan karaa si fudud: on asliga ah iyo caleemaha, cayayaanka yar yar ee cagaaran ayaa inta badan la arkay, saameeya geedi socod kasta oo geedo ah sababtoo ah joojinta dhamaystiran ee helitaanka nafaqooyinka nidaamka xididka ee ubaxa. Sidaa darteed, ma aha la yaab leh in hawlaha ka mid ah cayayaanka sida Kalanchoe si fudud u dhiman karaan. Ha dib u dhigin bilowgii dagaalka ee ka dhanka ah aphids.
Haddii caleemaha Kalanchoe Blossfeld ay bilaabaan inay qallalaan, u noqdaan huruud iyo luminayaan qaabkooda, iyo inflorescences hoos u dhacaan ama ma muuqdaan dhamaantood, waxaad xaqiijin kartaa in guuldarada aphids ay mar hore aad u daran tahay. Marka hore, meelaha ay dhibaatadu saameysey waa in isla markiiba laga saaraa, iyo inta kale ee ubaxa waa in lagu daweeyo siiba saabuunta potassium iyo / ama khamriga.
Waa arrin muhiim ah oo aad u muhiim ah in warshadu aysan u dulqaadan doonin walxahaas ku jira ciidda, taas oo ah sababta ay tahay in la daboolo ka hor inta aan la samayn.
Kiisaska ugu badan ee cudurkan geedkaan iyo weerarrada cayayaanka ayaa si toos ah ula xiriira xadgudubka daryeelka iyo xaaladaha xabsiga. Si loo sii wado badbaadinta Kalanchoe, waa in uu raaco talooyinka takhasuska.
Ugu dambeyntii, waxaan soo gabagabeyn karnaa in Blossfeld Kalanchoe uu ku fiican yahay beerashada guriga. Waad ku mahadsantahay fududeynta daryeelka iyo fududaanta cajiibka ah geedka waa mid aad u caan ah oo dalkeena ah sanad iyo sannad kasta waxay noqoneysaa mid jecel guryaha cusub.